အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: 03/01/2011 - 04/01/2011
ထူးဆန်းတဲ့ ရေပူစမ်းနဲ့ နှင်းခဲလုံးလေးများ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, March 30, 2011 Wednesday, March 30, 2011 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
ထူးဆန်းတာလေးတွေအကြောင်း မရေးဖြစ်တာ ကြာပြီမို့ ဒီပိုစ့်မှာတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ ရှာဖွေ တင်ပြချင်ပါသေးတယ်။
မီချီဂန် ရေကန်အစပ်က ရေခဲလုံးများ
သိပ်မကြာခင်ကမှ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ နှင်းတွေ ကျတဲ့ ဆောင်းရာသီကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။ နှင်းတွေ အဆုပ်အခဲလိုက် မြေပြင်ပေါ်မှာ ကျဆင်းလာရင် ကလေးတွေနဲ့ ပျော်တတ်သူအချို့က နှင်းလုံး (snow ball) တွေလုပ်ပြီး ဆော့ကစားတတ်ကြပါတယ်။ ဖြူဖြူအပွင့်လေးတွေ အဖြစ် ကျဆင်းပြီး မြေပြင်ပေါ်မှာ တဖြေးဖြေး အထပ်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ နှင်းပွင့်တွေဟာ လူကိုယ်တိုင်က မဖန်တီးဘဲ အလုံးကလေးတွေ ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အောက်က ပုံမှာ ရှိနေတဲ့ နှင်းလုံးခေါ် ရေခဲလုံးလေးတွေဟာ လူက ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ အံ့သြဖွယ်ရာ အလိုအလျောက် ဖြစ်နေကြတဲ့ အလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ချီဂန် ရေကန်ကြီးရဲ့ ကမ်းခြေတစ်လျောက် ခုလို များပြားလှတဲ့ နှင်းခဲလုံးတွေကို ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လို လူသားတွေကမှ ဒီလောက်များပြားလှတဲ့ နှင်းခဲလုံးတွေကို အအေးခံ၊ အပင်ပန်းခံပြီး ပြုလုပ်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နှင်းခဲလုံးတွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်များပြားစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ ဘယ်သူကမှ အတိအကျ မပြောနိုင်ပေမဲ့ ပညာရှင်တွေကတော့ ရေကန်ရဲ့ ကမ်းခြေအစပ်က နှင်းလွှာပြင်ကြီးဟာ ရေရဲ့ ရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ရာသီဥတု အေးခဲမှတ်တို့ကြောင့် ခုလို နှင်းလုံးလေးတွေဟာ သဘာဝတရားရဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့ ထူးဆန်းစဖွယ် ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ဘယ်သူတွေက ဒီနှင်းခဲတွေကို အလုံးလေးတွေ လုပ်ထားတာပါလိမ့်.
ခပ်ဝေးဝေးက ကြည့်လိုက်ရင် လုံးစက်နေတဲ့ နှင်းလုံးလေးတွေဟာ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် မျက်စိတစ်ဆုံး ရှိနေပြီး ပုလဲလုံးလေးတွေ ကြဲဖြန့်ထားသလို လှပဖြူဖွေးစွာ ရှိနေကြပါတယ်။ အောက်က ပုံတွေမှာ ဆက်ပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရေကန်ရဲ့ အောက်ခြေ ကြမ်းပြင်တွေမှာပါ များပြားလှတဲ့ ရေခဲလုံးတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေကန်အောက်ခြေမှာပါ များပြားလှတဲ့ ရေခဲလုံးများ
အဲဒီရေခဲလုံးတွေဟာ အဆုံးအစမရှိအောင် များပြားနေတာကို ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ မီချီကန် ရေကန်ကြီးရဲ့ ကမ်းခြေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်ပြီး တစ်ခြားကမ်းခြေမှာလည်း ရေကန်အောက်ခြေမှာ ခုလို ၀ိုင်းစက်နေတဲ့ အလုံးကလေးတွေ တွေ့ကောင်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်တွေ့ရတဲ့ အလုံးလေးတွေဟာ ခုမြင်ရသလို နှင်းခဲလုံးတွေတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို နှင်းလုံးတွေကိုတော့ ခုမြင်ရတဲ့ မီချီကန် ရေကန်ကြီးမှာသာ ထူးထူးခြားခြား မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်းခြေက ရေကန်စပ် တစ်လျှောက် များပြားလှတဲ့ ရေခဲလုံးများ
ဆက်လက် ဖော်ပြချင်တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုက နီဗားဒါး ပြည်နယ်ရှိ Hualapai တောင်ကြားမှာရှိတဲ့ ရေပူစမ်း အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, March 28, 2011 Monday, March 28, 2011 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
ခရီးသွားမှတ်တမ်းအဖြစ် နေပြည်တော်အကြောင်း ပိုစ့်တွေ ရေးခဲ့ရာမှာ နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ရေးဖို့ကျန်နေသေးတာကို လက်စသတ်ချင်ပါသေးတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပိုစ့်မှာတော့ နေပြည်တော် မြို့တော်တစ်ခွင်ရဲ့ ပုံရိပ်များကို ဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်မြို့ရဲ့ လမ်းမကြီးများ၊ အဆောက်အဦးများ၊ အထင်ကရ နေရာများ စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်မြို့အကြောင်း ရေးသားရာမှာ မရောက်ဖူးသေးသူများအတွက် မြို့အနေအထားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့သာ ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်မြို့တော်သစ်ကြီးမှာ ပါဝင်တဲ့ မြို့နံမည်တွေက မြန်မာစာ(ပါဠိ) မကျေရင် ဖတ်ဖို့ခက်တဲ့ နံမည်တွေ ဖြစ်ပါတယ်.. မြို့နံမည်တွေဖတ်နိုင်ဖို့ ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါရဲ့ လို့တောင် ကျွန်မ တွေးမိလိုက် ပါသေးတယ်.. ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းတက်တုန်းက ပါဠိယူခဲ့ရ အကောင်းသားလို့လည်း တွေးမိပါတယ်.. မြို့နာမည်တွေက ဇမ္ဗူသီရိမြို့၊ဇေယျာသီရိမြို့၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့၊ ဒက္ခိဏ သီရိမြို့တွေဟာ နေပြည်တော် မြို့တော်ကြီးထဲက မြို့ငယ်တွေဖြစ်ပြီး ပျဉ်းမနား၊ တပ်ကုန်း၊ လယ်ဝေးစတဲ့ မြို့တွေကိုလည်း မြို့နံမည်ရှေ့က နေပြည်တော်ထည့်လိုက်ပြီး နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား နေပြည်တော်လယ်ဝေး၊ နေပြည်တော် တပ်ကုန်းရယ်လို့ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ရပ်ကွက် နာမည်တွေကို ၀ဏ္ဏသိန္ဓိ၊ ပညာသိန္ဓိ၊ သုခသိန္ဓိ၊ ဓနသိန္ဓိ၊ ဘောဂသိန္ဓိ၊ ဗလသိန္ဓိ၊ မင်္ဂလာသိန္ဓိ စသဖြင့် အင်မတန်မှ မြန်မာဆန်သော (နန်းဆန်သော ) နာမည်များ ခေါ်တွင်ထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မြို့ အ၀င်မှာ ကတည်းက ကျယ်ဝန်းပြန့်ပြူးနေတဲ့ လမ်းမကြီးတွေကို မြင်ရတော့ ဒီလမ်းတွေကို ကြည့်ပြီး အော် ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ လမ်းတွေ ငါတို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ ရှိသားပဲလို့ တွေးမိပါတယ်။
နေပြည်တော်ရဲ့ ကျက်သရေဆောင် ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော်ကြီး (ဥာဏ်တော် ၃၂၅ပေ)
ရာဇဌာနီ လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိသော ဥပ္ပါတ သန္တိစေတီတော်မြတ်ကြီးအကြောင်းကို အသေးစိတ် ဓာတ်ပုံများစွာဖြင့် ( ဒီနေရာမှာ ) ဖော်ပြခဲ့ပြီးတာကြောင့် ဒီတစ်ပုံသာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မြို့အ၀င် ရာဇဌာနီ လမ်းမကြီး
ဒီလိုလမ်းမျိုး ကျုပ်တို့ရွာမှာလည်း ရှိစေချင် :)
ဓာတုစယ ဓာတ်ပေါင်းစု စေတီတော်
နေပြည်တော်ရောက်ရင် မြင်မြင်ချင်းစ သတိထားမိတာကတော့ ကျယ်ဝန်းတဲ့ လမ်းမတွေနဲ့ လမ်းမကြီးတွေ ဆုံရာမှာ လှပစွာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အ၀ိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်.. အ၀ိုင်းတွေမှာ ကြာပန်းပုံ၊ အင်ကြင်းပန်းပုံ၊ ကံ့ကော်ပန်းပုံ စတဲ့ ပန်းပွင့်ပုံတွေကို ကြီးမားလှပစွာ ဆောက်လုပ်ထားပြီး နေ့ခင်းဘက်ဖက်တော့ ရေပန်းများ ဖြာကျနေပြီး ညဘက်မှာတော့ မီးရောင်စုံများ လှပဝေဆာထိန်လင်းနေခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီအ၀ိုင်းတွေရဲ့ နံမည်ဟာ ပန်းပွင့်တွေအတိုင်း ကြာပန်း ၀ိုင်း၊ အင်ကြင်းပန်းဝိုင်း၊ ကံ့ကော်ပန်းဝိုင်းရယ်လို့ ခေါ်တွင်ကြတာ သတိထားခဲ့မိပါတယ်။ ရာဇသင်္ဂဟ အ၀ိုင်း၊ ဘောဂသိန္ဓိအ၀ိုင်း ၊ ၀ဏ္ဏသိန္ဓိအ၀ိုင်း စသည်တို့လည်း ရှိပါတယ်.။
နေ့ခင်း ရေပန်းများနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ မြင်ကွင်း
မီးရောင်စုံများ ရေပန်းများဖြင့် အ၀ိုင်းကြီးများရဲ့ ညအလှ
နေပြည်တော်မြို့တော်သစ်ကြီးမှာ တည်ရှိတဲ့ အထင်ကရ အဓိက နေရာများကို လက်လှမ်းမီသလောက် ဆက်လက် ဖော်ပြရရင်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, March 26, 2011 Saturday, March 26, 2011 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
“ငါတော့လေ ပန်းဘ၀သာ ဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် စက္ကူပန်းပဲ ဖြစ်ချင်တယ်”
သူတို့ နှစ်ဦးသား သူမ၏ အဆောင်ရှေ့က အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနှင့် အပွင့်များ ဝေနေပြီး အရိပ်ကောင်းလှသော စက္ကူပန်းခြုံကြီးအောက်ရှိ ကွပ်ပျစ်ပေါ်တွင်ထိုင်ကာ လက်ဖက်သုပ်နှင့် ရေနွေကြမ်းကို မြည်းနေကြရင်းမှ စက္ကူပန်းရုံကို မော့ကြည့်ကာ သူမ ထံက ထိုစကားသံ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
“အမ်.. နင်ကလည်း တစ်မျိုးပါလား.. မိန်းခလေးမဆန်လိုက်တာဟာ.. စက္ကူပန်းမှ ဖြစ်ချင်ရတယ်လို့။ သူများတွေများ နှင်းဆီတို့ စပါယ်တို့ သဇင်၊ သစ်ခွတို့ ကြိုက်ကြတယ်.. နင့်ကျမှ အနံ့လည်းမရှိ၊ အဖိုးလည်းမတန်တဲ့ စက္ကူပန်းကို ကြိုက်တယ်။ ထူးဆန်းပါပေ့ ”
“အော.. မိန်းခလေးမှန်ရင် အဲဒီနှင်းဆီမှ စပါယ်မှ သစ်ခွမှ ကြိုက်ရမယ်လို့ ဘယ်သူက သတ်မှတ်ထားလို့တုန်း. လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့။ ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲ။ ငါ စက္ကူပန်းတွေကို ကြိုက်တာ အကြောင်းရှိတယ်ဟ.. လှလို့ ကြိုက်တာထက် သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို သဘောကျလို့ ကြိုက်တာ”
“အရည်အချင်းဟုတ်လား .. နင်ကတော့ အထူးအဆန်းဘဲ.. ကဲ ဒါဆို ပြောစမ်းပါဦး.. နင့်စက္ကူပန်းမှာ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ရှိလို့တုန်း။ အဲဒီပန်းမှာ အရည်အချင်းရှိတယ်လို့ ငါတော့ တစ်ခါမှ မတွေးမိဘူး.. ငါသိတာတော့ ဘာအနံ့မှလဲ မမွှေးဘူး။”
သူမ ခပ်ဖွဖွလေး ပြုံးလိုက်ပြီး လက်ဖက်တစ်ဇွန်းကို ကောက်ဝါးလိုက်ကာ “ နင်ကြည့်လိုက်လေ.. ငါတို့ခေါင်းပေါ်က စက္ကူပန်းရုံကြီးကို.. တစ်ရုံလုံး အရွက်တွေတောင် မမြင်ရအောင် ပွင့်နေတယ်မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ နေ ဘယ်လောက်ပြင်းပြင်း လုံးဝ ညိုးနွမ်းသွားတာမျိုး မရှိဘူးလေ။ ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးနဲ့ တစ်ပင်လုံး ညွှတ်ဝေနေတဲ့ စက္ကူပန်းတွေကို ကြည့်ရတာ ဘယ်လောက် ပဏာရလိုက်သလဲဆိုတာ။ ရွှန်းစိုးနေတဲ့ အရောင်အသွေးတွေနဲ့ ပွင့်နေတာကိုမြင်ရတာ ဘယ်လောက်များ အားမာန်ပြည့်ဝတဲ့ မြင်ကွင်းလဲ။ စက္ကူပန်းက တစ်ခြားပန်းတွေလို ဆောင်းရာသီတို့ မိုးရာသီတို့လိုချိန်မှ ပွင့်တာမဟုတ်ဘဲ.. နွေရောက်မှ ရဲရဲရင့်ရင့် ပွင့်ကြတာ။ မျက်စိကျိန်းလောက်အောင် ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ တောက်တောက်ပပ ပွင့်နေလိုက်တာများ။ ကြည့်ရတာ အားတက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုလို့ ငါ့စိတ်ထဲ ခံစားရတယ်။ တကယ်တော့ လူတွေဟာ စက္ကူပန်းကို အတုယူသင့်တယ်။ သိလား.. ”
“ အင်း လုပ်စမ်းပါဦး နင့်ဒဿနတွေ.. ကြားရတာပေါ့ ”
“မလှောင်နဲ့ဟ.. ငါအကောင်းပြောတာ။ ခြံတွေမှာ စိုက်ထားတတ်တဲ့ နှင်းဆီတို့၊ စပါယ်တို့၊ သစ်ခွ၊ သဇင် စတဲ့ပန်းတွေဟာ စိုက်တဲ့သူက ယုယုယယ ရေလောင်းပေါင်းသင် လုပ်ပေးရတယ်။ မြေသြဇာထည့်ပေးရတယ်. ဒီတော့မှ သူတို့မှာ ပွင့်ဖူးကြရတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ လူတွေကသာ သူတို့ကို ပြုစုယုယမှု မလုပ်ပေးဘူး ဆိုရင် အပွင့်မသန်၊ အဖူးမဖူး ဖြစ်နေကြမှာလေ။ သူတို့က အစောင့်ရှောက်ခံ ပန်းတွေကိုး။”
“စက္ကူပန်းကျတော့ စိုက်ထားပြီးတာနဲ့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး ဒီတိုင်းပစ်ထားလိုက်.. အချိန်တန်လို့ ပွင့်တဲ့ခါရင် တစ်ပင်လုံး ခဲနေအောင် ပွင့်တတ်တာမျိုး။ ဒီ စက္ကူပန်းပင်ကြီးကို နင်ကြည့်လိုက်စမ်း.. ဘယ်လောက် လှလိုက်သလဲ.. နွေနေကို အံတုပြီး ရဲရဲရင့်ရင့် ပွင့်နေလိုက်တာလေ။ အဲဒါဟာ လူတွေအတွက် နမူနာကောင်းတွေ ပေးနေတယ်၊ ခွန်အားတွေ မျှဝေပေးနေတယ်လို့ ငါတော့ ယူဆတယ်”
သူမက ရေနွေးကုန်နေသော သူ့ခွက်ထဲ ဓာတ်ဗူးထဲမှ ရေနွေးကို ငှဲ့လိုက်ပြီး သူ့ထံ လှမ်းပေးကာ စကားကို ဆက်ပြောလေသည်။
“နင်စဉ်းစားကြည့်လေ။ ကျောထောက်နောက်ခံကောင်းပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း ခက်ခက်ခဲခဲ ဘာမှ မကြုံတွေ့ရဖူးဘဲ ဆွေမျိုးမိဘ အကူအညီနဲ့ ဘ၀ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာ နည်းနည်းလေး အခက်အခဲတွေ့ပြီ ဆိုတာနဲ့ ခံနိုင်ရည် မရှိကြတော့ဘူး။ သူတို့တွေက သူများကို အားကိုးပြီး ကြီးပြင်းလာရတော့ ပြဿနာ တစ်ခုခုနဲ့ကြုံရင် ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား မရှိကြဘူး။ အလွယ်တကူ အရှုံးပေးချင်ကြတယ်။ စိတ်ဓာတ် ကျလွယ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘ၀ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်လာရသူတွေကျတော့ အခက်အခဲကြုံလေ ပိုပြီး ရဲရင့်လေ၊ ခွန်အားတွေ ပိုပြီး ရလာလေ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဘ၀မှာ ဘယ်အရာကိုမှ အလွယ်တကူ မရခဲ့ဘူး။ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ဖြတ်သန်းလာရတာဖြစ်လို့ တော်တန်ရုံ အခက်အခဲမျိုးဆို မမှုတော့ဘူး.. ဖြေရှင်းဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြတယ်။ အခက်အခဲတွေ့လေ အရည်အချင်းပိုပြီး တောက်ပြောင်လာလေပဲ။ ဟောကြည့် စက္ကူပန်းတွေဟာ နွေနေပူလေ ပိုပြီးပွင့်လေ.. သူ့အရောင်အသွေးက ပိုပြီး စိုလက် တောက်ပလာလေ မဟုတ်လား ”
“အင်း နင်ပြောတော့လဲ ဟုတ်သလိုလိုပဲ။ ငါတော့ စက္ကူပန်းကို သေချာတောင် တစ်ခါမှ မကြည့်မိပါဘူးဟာ။ ကြိုက်တယ်လို့လည်း မထင်ဘူး.. ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူး ဆိုတာတောင် တစ်ခါမှကို မစဉ်းစားမိခဲ့တာပါလေ”
“ဘယ်ကြည့်မိမလဲလေ.. နင်ကလဲ ဘ၀မှာ ဘာအပူအပင်မှ မရှိဘဲ ကြီးပြင်းလာတဲ့သူကိုး. ပညာသင်ပြီးတာနဲ့ အချိန်တန်ရင် မိဘရဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ၀င်လုပ်လိုက်ရုံဘဲ။ နင့်ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် နင်ဘာများ ပူစရာရှိလို့လဲ။ ဒီတော့ အဲလို ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေက ဘ၀အတွက် ခွန်အားတွေ တကူးတက ရှာနေစရာမှ မလိုတာ။ ငါတို့လို ဘ၀တွေကျတော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးနဲ့ အမြဲတမ်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက် ဘ၀ကိုရုန်းကန်ဖို့ ခွန်အားတွေ၊ ရဲရင့်ခြင်းတွေကို ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ရအောင်ယူရတယ်။ မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်လေ။ ဒီတော့ မြင်ရတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ငါ့အတွက်တော့ စက္ကူပန်းဟာလည်း ခွန်အားတွေ ပေးတဲ့ပန်းလို့ ခံယူတယ်.. ဒါတင်မကသေးဘူး သိလား.. စက္ကူပန်းရဲ့ နောက်ထပ်ထူးခြားချက် ရှိသေးတယ်”
“ဟင် စက္ကူပန်း ဒဿနတွေက များလှပါလားဟ ” သူက ခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့် ကောင်မလေးကို စ လိုက်သည်။ သို့သော် သူမက သူ စ လိုက်သည်ကိုပင် သတိထားမိပုံမပေါ်.. ပြောလက်စ စကားကိုသာ ဆက်ပြီး ပြောနေခဲ့သည်။
“ တစ်ခြားပန်းတွေက ခူးဆွတ်သူကို စောင့်နေကြတယ်.. ခူးချင်တဲ့သူတွေကလည်း များတယ်။ ခူးဆွတ်ခံရပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ရနံ့နဲ့ အလှတွေက ခူးတဲ့သူအတွက်ပဲ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စက္ကူပန်းကိုကျတော့ ဘယ်သူကမှ မခူးကြဘူး။ ပွင့်သမျှ အပွင့်တွေအားလုံးဟာ အပင်ပေါ်မှာဘဲ လှလှပပ ၀ံ့ဝံ့ကြွားကြွား ရှိနေကြတယ်။ လူတွေက စက္ကူပန်းကို စိုက်ကတည်းက ခူးဖို့၊ ပန်းအိုးထိုးဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ စိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ အပင်မှာဘဲ ပွင့်စေဖို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှပစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး စိုက်ကြတာ။ ဒါကြောင့် သူဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းအတွက် ပွင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အားလုံးအတွက် အလှဆင်ဖို့ တန်ဖိုးရှိစွာ ပွင့်ရတဲ့ ပန်းဖြစ်လာရတယ်။ သူ့အစွမ်းအစနဲ့ လောကကြီးကို အလှဆင်နေတာလေ။ ရာသီပူပြင်းတဲ့ ဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်တယ် အရောင်အသွေးကလည်း စုံတယ်။ ပြီးတော့ မြင်ရသူတိုင်းကို စိတ်ကြည်နူးစေတယ်.. ခွန်အားတွေ ရရှိစေတယ်လေ။ ဘယ်လောက် လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ ပန်းလဲ။ ငါလဲ စက္ကူပန်းလို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အလှဆင်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားချင်တယ်။ ကြိုးလဲကြိုးစားမယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ငါသာ ပန်းဘ၀ ဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် စက္ကူပန်းပဲ ဖြစ်ချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာပေါ့”
“အမယ်. နင်က စက္ကူပန်းလို ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုများ အလှဆင်မလို့လဲ”
“ငါအခု တက်နေတဲ့ MBA ပြီးတာနဲ့ ငါ့ဇာတိကို ပြန်မယ်လေ။ ပြန်ပြီးရင် မဖွံ့ဖြိုး၊ မတိုးတက်သေးတဲ့ ငါတို့ရွာကလေးမှာ ကလေးတွေကို စာပြန်သင်ပေးရမယ်။”
သူမ စကားအဆုံး သူ့လက်ထဲက ရေနွေးခွက်က လွတ်ကျမတတ်ဖြစ်ပြီး ရေနွေးကြမ်းတစ်ချို့ သူ့ပုဆိုးပေါ် ဖိတ်ကျသွားခဲ့သည်။
“ဘယ်လို.. နင်ကရွာပြန်ပြီး ဆရာမလုပ်မယ် ဟုတ်လား။ ဒီလောက် ပညာတွေ အများကြီး သင်ထားပြီး ရွာပြန်ကျောင်းဆရာမ လုပ်ဖို့တဲ့လား။ ကျောင်းဆရာမ လုပ်ဖို့ဆို ဒီMBA တွေ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဒီပလိုမာတွေ၊ ကွန်ပျူတာဘွဲ့တွေ တက်ထားဖို့ လိုသေးလို့လား။ နင် အစောကတည်းက ရိုးရိုးဘွဲ့တစ်ခုလောက် ရကတည်းက ရွာပြန်ပြီး ဆရာမလုပ်နေရင် ရပြီဘဲ။ အခု နင်တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုခုမှာ အလုပ်ဝင်လို့ ဖြစ်နေပြီ။ အဆုံးစွန်ကွာ ငါ့အလုပ်မှာ နင်ဝင်လုပ်မလား.. နင့်အတွက် အလုပ်တစ်နေရာ လုံးဝ မရှားဘူး။ ငါပေးနိုင်တယ်. လစာလဲကောင်းစေရမယ်”
သူမက မျက်လုံးလေးကို မှေးစင်းလိုက်ရင်း တွန့်ကွေးသွားသော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံမှ မပီပြင်သော အပြုံးတစ်စနှင့် “ဟင့်အင်း.. ငါ ဒီမှာဘဲ အလုပ်လုပ်ရင် ငါ့တစ်ယောက်ထဲ အတွက်တော့ ကောင်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါ့ရပ်ရွာအတွက်တော့ ဘာမှ အထောက်အကူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ငါက တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်းအတွက် ရှင်သန်ချင်တဲ့ ပန်း မဟုတ်ဘူးလေဟာ။ စက္ကူပန်းလို ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အလှဆင်ချင်တာ။ ငါတို့ ရွာကလေးက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သိပ်ခက်ခဲတော့ ပညာရေးမှာ မဖွံ့ဖြိုး မတိုးတက်ဘူး။ ပညာရေးမှ မဟုတ်ပါဘူးလေ. ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အားလုံး နိမ့်ကျနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်”
“နင်က နင့်ရွာကို သိပ်ချစ်တာပဲနော်”
“ဟုတ်တယ်.. ငါ့ရွာကလေးကို ငါခင်တွယ်တယ်.. ဘာမှ မတိုးတက်သေးတဲ့ ငါ့ရွာကလေးကို တိုးတက်လာအောင် လုပ်ပေးချင်တယ်။ ငါ့စိတ်ကူးတွေ သိပ်မြင့်နေမလားတော့ မသိဘူး”
သူမက ခပ်ဝေးဝေးကို လှမ်းကြည့်နေသော်လည်း ဘာကိုမှ မြင်တွေ့ပုံမရဘဲ.. သူမ ရွာကလေးကိုသာ မြင်ယောင်နေပုံ ရလေသည်။
“နင်က ဘာတွေလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားလို့လဲ” သူ့အမေးစကားအဆုံးတွင်
“ငါ့ရွာကလေးကို ပြန်ရောက်ရင် စာကြည့်တိုက်လေး တစ်ခု ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်မယ်။ စာဖတ်ရကောင်းမှန်း မသိကြတဲ့ ငါတို့ရွာက ကလေးတွေကို စာဖတ်တတ်တဲ့အကျင့် ရလာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးရမယ်။ တိုက်တွန်း အားပေးရမယ်.. ငါတို့အရပ်မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျောင်းထွက်ပြီး ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ အများကြီးပဲ၊ ပြီးတော့ ကျောင်းစာဆိုတာ သေစာရှင်စာလောက် ဖတ်တတ်ရင် တော်ပြီလို့ ခံယူပြီး ကျောင်းမပြီးခင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ မိန်းခလေးတွေလည်း အများကြီး ရှိနေတယ်.. ငါတို့ရွာကလေးမှာ ပညာတတ် သိပ်နည်းတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကလေးတွေကို စာတွေများများ ဖတ်ပြီး အသိဥာဏ်တွေ ပိုပြီးမြင့်မားလာအောင် ငါ လုပ်ပေးချင်သေးတယ်။ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိသေးတဲ့ ရွာက လူငယ်လေးတွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ အကျွမ်းတ၀င် ဖြစ်လာအောင်၊ သုံးတတ်လာအောင်လည်း လုပ်ပေးချင်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်ပြီး ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်ဒေသ ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ပျော်မွေ့နေတဲ့ ငါတို့ ရွာကလေးက လူတွေကို ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေမှုတွေကို သိစေချင်တယ်..”
“နင်လုပ်ချင်တာတွေက များလှပါလား. ဒါတွေက လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား ”
သက်ပြင်းခပ်ဖွဖွ တစ်ချက်ချပြီး သူမက သူ့အမေးကို ဖြေသည်။ “အင်း ဟုတ်တယ် ငါလုပ်ချင်တာတွေက အများကြီးပဲ။ ဒါတွေအားလုံး တစ်ခါတည်းတော့ မဖြစ်နိုင်မှန်း ငါလဲသိပါတယ်။ တဖြေးဖြေး လုပ်ယူသွားရမှာပေါ့။ အဲလို လုပ်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေ အတားအဆီးတွေ အများကြီး တွေ့ရမယ်ဆိုတာ ငါမျှော်လင့်ထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ ငါက စက္ကူပန်းလို ရှင်သန်မယ်လေ.. ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ့တွေ့ စိတ်မပျက်ဘဲ ငါဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်.. စက္ကူပန်းလို နေပူလေ ရဲရဲတောက် ပွင့်လေဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်စေရမယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါ ငါ့ရွာကလေးဟာ ခုအနေအထားထက် ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတာမျိုး ဖြစ်ကို ဖြစ်လာရမှာပါလေ။ ငါ့ကိုယ်ငါ ယုံကြည်တယ်”
သူမ နှုတ်ခမ်းများက ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြသူ၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတို့၏ လက္ခဏာရပ်အဖြစ် တင်းတင်းစေ့လို့ နေခဲ့သည်။ ထိုနေ့က သူတို့ရှေ့တွင် ရှိနေခဲ့သော လက်ဖက်သုပ် ပန်းကန်းလေးမှာ သူရော သူမပါ ထပ်မနှိုက်ဖြစ်တော့ဘဲ မျက်နှာငယ်စွာ ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ ထို့အတူ သူမကို ပြောမည်ဟု ရည်ရွယ်ထားခဲ့သော စကားအချို့လည်း ဖွင့်မပြောဖြစ်တော့ဘဲ သူ့ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းဆည်း ထားလိုက်လေတော့သည်။ သူမက တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း အတွက် မရှင်သန်လိုဘူးဟု ဆိုသည်မဟုတ်လားလေ။
စက္ကူပန်းကဲ့သို့ အများအကျိုးအတွက် ရှင်သန်ချင်သော မိန်းခလေးနှင့် သူ မတွေ့ဖြစ်ကြတော့သည်မှာ နှစ်များစွာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ သူကလည်း မဆက်သွယ်သလို သူမကလည်း သူ့ထံ မဆက်သွယ်ပါ။ ကြည့်လေရာအရပ်တွင် စက္ကူပန်းတွေ စိုက်ပျိုးထားသော မြို့တစ်မြို့ကို သူ ရောက်နေခဲ့သဖြင့် စက္ကူပန်းဖြစ်ချင်သော မိန်းခလေးကို ပြင်းပြင်းပြပြ သတိရလိုက်မိလေသည်။ ယခု သူရောက်နေသော မြို့ကလေးသည် နွေရာသီတွင် ပူပြင်းသော ရာသီဥတုမျိုးရှိပြီး အခြားပန်းများထက် စက္ကူပန်းများသာ အိမ်တိုင်းလိုလို စိုက်ထားကြသကဲ့သို့၊ လမ်းဘေးဝဲယာနှင့် ပန်းခြံတို့တွင်လည်း စက္ကူပန်းခြုံများကို လှပစွာ ပုံဖော် အလှဆင်ထားကြသည်။ တစ်မြို့လုံး စက္ကူပန်းရောင်စုံတွေက နွေနေအောက်တွင် လန်းဆန်းတောက်ပစွာဖြင့် အားနှင့် မာန်နှင့် ပွင့်နေကြသည်ကို မြင်ရသဖြင့် သူမပြောခဲ့သော စကားများကို ပြန်ပြီး သတိရမိခြင်း ဖြစ်လေသည်။
နှစ်များစွာကြာခဲ့သော်လည်း စက္ကူပန်းတွေ မြင်တိုင်း သူမကို သတိရမိဆဲဖြစ်သည်။ သူမကရော သူ့ကို သတိရနေမည်လား မေ့နေပြီလား သူ မသိနိုင်ခဲ့ပါ။ စက္ကူပန်းတွေမြင်တိုင်း သူမကို သတိရသည်ဟု ဆိုရာတွင် စက္ကူပန်းတွေကို မမြင်ရင်တော့ သတိမရသည့်သဘော သက်ဝင်သွားပေလိမ့်မည်။ စက္ကူပန်းလိုဖြစ်ချင်သော မိန်းခလေး မသိလိုက်သည့် အချက်မှာ သူမ၏ ဇာတိရပ်ရွာကို ပြန်သွားပြီး၊ သူတို့နှစ်ယောက် မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ကတည်းက သူ ဘယ်တုန်းကမှ ကြိုက်သည်မထင်ခဲ့သော၊ သတိမထားခဲ့သော စက္ကူပန်းများကို သူ့အိမ် နေရာအနှံ့၊ ခြံစည်းရိုးများတွင်လည်းကောင်း၊ အိမ်ပေါ် ၀ရံတာထက်တွင် ပန်းအိုးများဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခြံဝင်းထဲတွင် လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးထားခဲ့မိလေသည်။ ခုချိန်တွင်တော့ သူရောက်နေသော မြို့ကလေးအတိုင်း သူ့တစ်အိမ်လုံးသည်လည်း တောက်ပ၀ံ့ကြွားစွာ ပွင့်ဝေနေကြသော စက္ကူပန်းများဖြင့် နွေနေအောက်တွင် လှပနေပေတော့မည်။ စက္ကူပန်းနှင့်တူသော မိန်းခလေးသည်လည်း သူမ၏ ဇာတိရွာကလေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သူမပြောခဲ့သည့်အတိုင်း အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နေမည်ဟု သူ ယုံကြည်ပါသည်။ စက္ကူပန်းတွေကို စိုက်ပျိုးထားသူ သူကိုယ်တိုင်မှာတော့ ခုချိန်ထိတိုင် စက္ကူပန်းလို မကျင့်ကြံနိုင်ခဲ့သေးပေ။
လမ်းနံဘေးမှာ ပွင့်ဝေရပေမဲ့ စက္ကူပန်းတွေကတော့ နွေနေပူလဲ လန်းနေမြဲ လန်းနေဆဲပါ။
အစိမ်းရောင် ဆိုးကြသူများ ...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, March 24, 2011 Thursday, March 24, 2011 Labels: နှစ်သက်မိသော စာစုများ
ဦးဘောဂဟာ သိပ်ကို ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးပေါ့။ ပိုက်ဆံချမ်းသာလွန်းတော့လဲ သူ့ဘ၀မှာ သူလိုချင်တာမှန်သမျှ ဘာမှ မရတာ မရှိနိုင်လောက်အောင် ပြည့်စုံနေတော့တာပါဘဲ.. ဘာစားချင်လဲ. ဘာလုပ် ချင်လဲ.. ဘာဝတ်ချင်လဲ. ဘယ်သွားချင်လဲ. သူလုပ်ချင်တာ ဖြစ်ချင်တာ မှန်သမျှ သူပါးစပ်က ဟစရာ မလိုအောင်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ သူတွေကလည်း သူ့ဘေးနားမှာ ၀ိုင်းဝိုင်းကိုလည်နေတာပါဘဲ.. ပိုက်ဆံကြွယ်ဝ ချမ်းသာသူတွေ၊ ရာထူးအာဏာ မြင့်မားသူတွေ ဘေးနားမှာဆို မျက်နှာလိုအားရ လုပ်ပေးချင်ကြတဲ့သူတွေ ၊ ခစားဝိုင်းရံနေသူတွေ များနေတတ်တာ လောကရဲ့ ဓမ္မတာတစ်ခုဘဲ မဟုတ်လားလေ.. ဒီတော့လည်း ဦးဘောဂဘေးနားမှာ အခွင့်အရေးလိုချင်သူတွေ၊ နေရာကောင်းရချင်သူတွေ ၀ိုင်းနေတာ မဆန်းဘူးပေါ့။
သို့သော်လည်း ငွေကြေးချမ်းသာပြီး လိုတိုင်းတ ရနေတဲ့ ဦးဘောဂမှာ ဘယ်လိုငွေကြေး၊ ချမ်းသာမှုတွေနဲ့မှ ၀ယ်လို့မရတဲ့အရာတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်.. အဲဒါက မေတ္တာတရားနဲ့ ကျန်းမာရေးပါ။ ဦးဘောဂမှာ တကယ့် မေတ္တာစစ်မှန်နဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်ပေးမဲ့သူ၊ ချစ်ခင်ပေးမဲ့သူတွေ သူ့အနားမှာ မရှိပါဘူး.. ပိုက်ဆံချမ်းသာပြီး တော်ရုံလူကို လူမထင်တတ်တဲ့ စိတ်သဘောထားရှိပြီး ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဦးဘောဂရဲ့ ဒေါသတကြီး ရိုက်နှက် နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်တွေကို မခံနိုင်တဲ့အတွက် ဦးဘောဂရဲ့ ဇနီးဟာ သူ့ကို ကွာရှင်းထားခဲ့ပြီး သားသမီးတွေခေါ်ကာ အိမ်ကနေ ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီကတည်းက သူတို့ကို နေရာအနှံ့ လိုက်ရှာပေမဲ့ ခုချိန်ထိ ရှာလို့မတွေ့တော့အောင် သူ့ဇနီးဟာ ခြေရာဖျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ငွေကြေးအင်အား၊ လူအင်အားများစွာ သုံးပြီး သူ့ဇနီးနဲ့ ကလေးတွေကို မြို့ရွာအနှံ့၊ တိုင်းပြည်အနှံ့ လိုက်ရှာပေမဲ့ သတင်းအစအနလေးတောင် ရှာမတွေ့ခဲ့ရတော့ပါဘူး။
အဲဒီကတည်းက ဦးဘောဂရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ရောဂါဝေဒနာကို အကြီးအကျယ် ခံစားနေရပါတော့တယ်.. သူ့ရောဂါကို ကုသဖို့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ အထူးကုကြီးတွေ၊ မြောက်မြားစွာနဲ့ ငွေတွေ အများကြီး အကုန်ုအကျခံပြီး ကုသပေမဲ့ အဲဒီ မျက်စိဝေဒနာဟာ လုံးဝ မသက်သာပါဘူး။ မျက်စိရောဂါ သက်သာဖို့ သောက်ရတဲ့ ဆေးတွေဆိုတာ မရေ မတွက်နိုင်တော့သလို ထိုးလိုက်ရတဲ့ ဆေးတွေကလည်း သူ့အသားမှာ အပ်ဖျားရာ လွတ်တဲ့နေရာတောင် ကျန်သေးရဲ့လားလို့ ထင်ရစရာပါဘဲ.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲ နံမည်ကြီးဆရာတွေ၊ ဆေးအကောင်းစားတွေ၊ အထူးကု ဆေးခန်းတွေနဲ့ ပြနေပါစေ၊ ကုနေပါစေ.. သူ့ရောဂါဟာ မသက်သာတဲ့အပြင် ယခင်ကထက်ပိုပြီး တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုဆိုးလာပါတယ်..
တစ်နေ့တော့ ဦးဘောဂဟာ မျက်စိဝေဒနာတွေကို ကုသရာမှာ အစွမ်းထက်တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခု ကြားလိုက်ရပါတယ်.. ဒါနဲ့ သူ့တပည့်တပန်းတွေ အများကြီးခေါ်ဆောင်ပြီး အဲဒီဘုန်းကြီးရှိရာကို သွားရောက်ကာ သူ့မျက်စိဝေဒနာကို ကုသပေးဖို့ တောင်းပန် ပြောဆိုပါတယ်. ဘုန်းကြီးဟာ ဦးဘောဂဖြစ်နေတဲ့ မျက်စိဝေဒနာအကြောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတာနဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်လိုက်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ဦးဘောဂကို သူ့ဝေဒနာအတွက် အကောင်းဆုံး ပေးလိုက်တဲ့ ကုသနည်းက အစိမ်းရောင်ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး ကြည့်ပေးဖို့ အကြံပေးတာပါ။ တစ်ခြား အရောင်တွေကို လုံးဝ မကြည့်ပါနဲ့။ ကြည့်ရင် မျက်စိနာတာ ပျောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ အစိမ်းရောင် တစ်ရောင်တည်းအပေါ်မှာသာ အာရုံစူးစိုက်ပြီး ကြည့်ပေးမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကြာလာရင် သူခံစားနေရတဲ့ မျက်စိနာကျင် ကိုက်ခဲတာတွေဟာ တဖြေးဖြေး သက်သာလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဦးဘောဂတို့အုပ်စုဟာ ဘုန်းကြီးထံကနေ ၀မ်းသာအားရ ပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက် အိမ်ရောက်တဲ့အခါ သူဌေးကြီးက တစ်အိမ်လုံးကို အစိမ်းရောင် ပြောင်းပစ်ဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီတော့ သူဌေးကြီးရဲ့ အမိန့်ကို ဘာဆို ဘာမှ စောဒက မတက်ရဲ၊ ပြန်မပြောရဲကြတဲ့ သူရဲ့ တပည့် လက်သားတွေကလည်း တစ်အိမ်လုံးကို အစိမ်းရောင်ဆေး သုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြသလို အိမ်ရဲ့ အသုံးအဆောင်၊ အိုးခွက်ပန်းကန်၊ ခန်းဆီးလိုက်ကာ၊ ကော်ဇော၊ အိပ်ရာခင်း စသည်အားလုံးကို အစိမ်းရောင်တွေ ရှာဝယ်ပြီး တစ်အိမ်လုံးကို အစိမ်းရောင်ဖြစ်အောင် ပြောင်းလိုက်ကြပါတယ်။ ဘယ်နေရာကို ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် အစိမ်းရောင်ကလွဲလို့ အခြား ဘာအရောင်ကိုမှ မမြင်ရအောင် ပြင်ဆင်ထားကြတာပေါ့လေ။ ဦးဘောဂ သဘောကျဖြစ်ဖို့၊ သူ့အကြိုက် ဖြစ်အောင် အားကြိုးမာန်တက် ကြိုးစားလိုက်ကြတာမှာ ဦးဘောဂရဲ့ ငွေတွေ အများကြီး ကုန်ကျသွားသလို တစ်အိမ်လုံးဟာလည်း အစိမ်းရောင်တွေ ဖုံးလွှမ်းလို့ပေါ့။ အစိမ်းရောင် ၀ယ်လို့မရနိုင်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ ဆိုရင်လည်း ဆေးအစိမ်းရောင်တွေ သုတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ လအနည်းငယ် ကြာလာတဲ့ တစ်ရက်မှာ အစိမ်းရောင်ကို အာရုံစူးစိုက်ဖို့ ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီးဟာ သူဌေးကြီး ဦးဘောဂတို့မြို့ကို ရောက်လာပါတယ်။ ဘုန်းကြီးက သူဌေးကြီးရဲ့ မျက်စိရောဂါ အခြေအနေကို သက်သာရဲ့လား.. ဘယ်လိုနေလဲဆိုတဲ့ သတင်း မေးချင်တာနဲ့ ဦးဘောဂတို့အိမ်ကို ရောက်လာပါတယ်. သူဌေးကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ ဘုန်းကြီး ကြွလာတယ်လဲ ဆိုရော ဦးဘောဂရဲ့တပည့်တွေဟာ အပြေးအလွှား ရောက်လာကြပြီး အစိမ်းရောင် ခြုံထည်ကြီးတစ်ထည်ကို ဘုန်းကြီးရဲ့ အပေါ်ကို လွှမ်းခြုံပေးလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဘုန်းကြီးဟာ တအံ့တသြဖြစ်ပြီး သူ့တပည့်တွေကို ဘာဖြစ်လို့ သူ့ကို ဒီဟာကြီး လာခြုံပေးရတာလဲလို့ မေးပါတယ်။ ဒီတော့ ဦးဘောဂရဲ့ တပည့်တွေက “ဟာ အရှင်ဘုန်းကြီးပဲ တပည့်တော်တို့သူဌေးကို အစိမ်းရောင်ကိုပဲ ကြည့်ရမယ် တစ်ခြားအရောင်တွေ ကြည့်ရင် မျက်စိဝေဒနာပျောက်မှာ မဟုတ်ဘူး ပိုဆိုးလာမယ်လို့ ပြောထားခဲ့တာလေ.. ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးရဲ့သင်္ကန်းအရောင်ကို မြင်ရင် သူဌေးကြီးရဲ့ ဝေဒနာ ပိုဆိုးမှာစိုးလို့ တပည့်တော်တို့က အစိမ်းရောင်ကို လာခြုံပေးတာပါ” လို့ ပြန်ဖြေကြပါတယ်။
ဒီတော့မှ ဘုန်းတော်ကြီးဟာ အိမ်တစ်ခုလုံးကို အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ ပန်းအိုးတွေ လိုက်ကာခန်းဆီး ကော်ဇော မြင်မြင်သမျှ အရာအားလုံးဟာ အစိမ်းရောင်တွေကြီး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတော့တယ်.. ဒါတွေကို တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဘုန်းကြီးက အားရပါးရ အသံထွက်အောင် ရယ်မောလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ “ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ.. သူဌေးကြီးရဲ့ တပည့်တွေဟာ ဒီလောက်တောင်ဘဲ အတွေးချော်ရလေသလား၊ ဒီထက်ကောင်းတာ မစဉ်းစားနိုင်ကြတော့ဘူးလား ” လို့ ပါးစပ်က ပြောလဲပြော ရယ်လဲ ရယ်နေပါတော့တယ်။ သူဌေးကြီးရဲ့ တပည့်တွေက ဘုန်းကြီး ဘာကြောင့်မို့ ဒီလောက် ရယ်မောနေတယ်ဆိုတာ နားမလည်နိုင် ဖြစ်နေတော့ ဘုန်းကြီးကို “အရှင်ဘုရား ဘာကြောင့် ဒီလောက်ရယ်နေတာလဲ” လို့ မေးမြန်း လျှောက်တင်ကြတယ်လေ။ ဒီတော့မှ ဘုန်းတော်ကြီးက “ခုလို တစ်အိမ်လုံးကို အစိမ်းရောင် ပြောင်းပစ်လိုက်တော့ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လောက်များ ကုန်သွားပြီလဲ။ တကယ်လို့များ မင်းတို့သူဌေးအတွက် အစိမ်းရောင်မှန်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မျက်မှန်စိမ်းလေး တစ်လက်လောက်သာ ၀ယ်ပေးလိုက်ရင် ပိုက်ဆံ နည်းနည်းလေးဘဲ ကုန်မယ် မဟုတ်ဘူးလား။ မျက်မှန်တပ်ပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြင်သမျှ အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီပေါ့ကွယ်။ ဒါကို မတွေးမိဘဲ အစိမ်းရောင်ပြောင်းဖို့ ဒီလောက် ကုန်ကျစရိတ်တွေ အများကြီး သုံးပြီး အကျယ်ချဲ့ထားတာကို အံ့သြမိပါတယ်ကွာ။ ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အိန္ဒိယပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်မက ဒီပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ကို “အစိမ်းရောင်ဆိုးကြသူများ” လို့ နာမည် ပေးလိုက်ပါတယ်.. ပုံပြင်ထဲက ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့လေးကိုတော့ စာဖတ်သူများကိုယ်တိုင် နှစ်သက်သလို ရှာဖွေကြည့်ကြပါစို့လို့...
Sulina Menon ရဲ့ Let us Change Our Vision ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။